६ प्रतिशत सकारात्मक सर्किट लागेर कति पटक बन्द भयो नेप्से? यस्तो छ सर्किट ब्रेकरको इतिहास – Doink News!
यस अघि पनि तीन कारोबार दिन नेप्से, ६ प्रतिशत बढेर बन्द भइसकेको छ। २०७७ असार १६ गते मंगलबार, नेप्से पहिलो पटक ६ प्रतिशत बढेको थियो। सो दिन नेप्से १२६०.७५ विन्दुमा बन्द भएको थियो। त्यसको अर्को कारोबार दिन अर्थात असार १७ गते पनि नेप्से ६ प्रतिशत बढेर बन्द भएको थियो। त्यसैगरी, तेस्रो पटक नेप्से सोही वर्षको साउन ४ गते पनि ६ प्रतिशत बढेर बन्द भएको थियो। र आज चौथो पटक नेप्से ६ प्रतिशत बढेर कारोबार अवधिभन्दा अगावै बन्द भएको हो।
सर्किट ब्रेकर भनेको के हो?
स्टक एक्सचेन्जले धितोपत्रहरुको मूल्यमा हुन सक्ने अस्वाभाविक उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्नका लागि धितोपत्र कारोबार हुँदा मूल्यमा हुन सक्ने घटबढको सीमा तोकेको हुन्छ। यसलाई बजारको भाषामा सर्किट ब्रेकर भन्छन्। बजार स्थायित्व, सुरक्षित एवं सहज कारोबारका लागि स्टक एक्सचेञ्जले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
Categorized as ML Tagged ६, इतहस, कत, छ, नपस, पटक, परतशत, बनद, बरकरक, भय, यसत, लगर, सकरतमक, सरकट